हलेसी महादेवले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन ! हेर्नुहोस अाजकाे राशिफल : - StarPratika.com
हलेसी महादेवले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन ! हेर्नुहोस अाजकाे राशिफल :
नेपाल ,काठमाण्डौमा सूर्योदय : बिहान ०६:२७ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:०९ बजे,आजको चाडपर्व र उत्सव : मार्ग संक्रान्ति, सत्ययुगादि, कुष्माण्ड नवमी, हेटौंडा कूुष्माण्ड सरोवरमा मेला, सको चंगुवने
आगामी ३ दिनभित्र पर्ने चाडपर्व र उत्सव तथा शुभ मूहुर्त : भोलिको चाडपर्व र उत्सव : बलम्बु महालक्ष्मी यात्रा, धादिंग, फूलखर्कमा गंगाजमुना मेला, ०३ गते : हरिबोधिनी एकादशी व्रत, तुलसी विवाह, भीष्मपञ्चकारम्भ, बराहक्षेत्र सुनसरीमा धार्मिक मेला प्रारम्भ, खोटांगको बराहपोखरीमा मेला, ०४ गते : भौम प्रदोष व्रत, चांगुनारायण अखण्ड दीप दर्शन, रुरु रिडीक्षेत्रमा हृषिकेश रथयात्रा, मन्वादि,
प्रभावशाली र ठूला मानिसको सहयोग जुटाउन सकिन्छ । आमाको सहयोगबाट फाइदा मिल्नेछ । सामाजिक कार्यले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ । तर, स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । सम्झौताले खिन्नता बढाउनेछ भने बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने छ । भूमि तथा मातृधनबाट लाभ लिने समय छ । विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ । आजका लागि शुभअङ्क ८ र शुभरङ्ग गाढा रातो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ सों सोमाय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
प्रकाशित मिति : 2018-11-17
गायक राजन बाखरेलको मौलिक तिज गीत ”राष्ट्रपति” भिडियो सहित
पत्रकार थापालाई गोगो फाउण्डेशन अवार्ड
आज २०७६ चैत १५ गते शनिवारको राशिफल पढ्नुस् तपाईको कस्तो छ ।
मेरो दिल छ पोखरामा फागुन ५ गते विशेष शो हुदै
“फिल्मी फुच्चे” एप सार्वजनिक, चलचित्रप्रेमीहरुको लागि नेपाली, हिन्दी, साउथ इन्डियन र हलिउडका चलचित्रहरुको
श्रीकृष्ण बम मल्लको ‘सान्नानीलाइ ‘बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक